Dad Malmö lagu soo oogey danbiyo la xiira komputero ay jabsadeen - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirkii : TT Nyhetsbyrån
Dad Malmö lagu soo oogey danbiyo la xiira komputero ay jabsadeen
8 qof oo Malmö lagu soo oogey danbiyo la xiriira komputero ay u dheceen
La daabacay måndag 18 september 2017 kl 12.57
Siddeed qof ayaa magaalada Malmö maanta denbi lagu soo oogey kuwaas oo lagu eedeeyey in ay jabsadeen komputer-ada shirkadaha, bangiyada iyo hey’ado kala duwan oo dalkan ku yaal.
Ninka gundhigga u ah falalkan danbi oo 38 jir ah ayey booliisku qabteen isagoo komputer-ku u daaran yahay taas oo ciidamada booliiska u sahashey in ay helan rugtii xogtaas kombutarada (server) lagu keydinayey oo ku taaley dalka Polen.
Stefan Larsson oo ciidamada booliiska ka tirsan ayaa yiri sidan:
- Runtii nasiib ayaanu laheyn markaan arrinkaas gacanta ku dhigney, ayuu yiri Stefan Larsson.
Falkaan danbi oo lagu sheegey in uu yahay falkii ugu xumaa ee noociisa ah oo ka dhaca dalkaan Sweden ayaa la sheegey in ay saameysey waxna ay ka soo gaareen shirkado ama hey’ado ilaa 60 kor u dhaafaya.
Shirkadaha iyo hey’adaha falkaas uu dhibka ka soo gaarey waxaa ka mid ah Swedbank, Ikano, ciidamada asluubta, kaniisadda Sweden iyo waliba xisbiga Sverigedemoqoraadi-ga.
Lacagaha dabiyadaan la isku dabamarshey ayaa dhan 40 milyan oo karoon, waxaana danbiga dadka lagu soo eedeeyey uu la xiriiraa komputero loo dhacey, tuugo xad dhaaf ah, iibsasho alaabo la soo xadey, lacago hab suuq madow lagu sharciyeeyey iyo qoraallo rasmi ah oo la foorjar gareeyey.
Lacagaha bangiyada iyo hey’adaha lagala baxay ayaa qaarkood waxaa loo direy dalalka Kosovo iyo Hongkong, jugta ugu weynina waxay soo gaartey bangiga Swedbank.
Falalka danbiyadan ayaa socdey qiyaastii muddo hal sano ah, laga soo bilaabo dhammadkii sanadkii 2015-kii ilaa iyo 3-dii bishii oktobar ee sanadkii hore.
Ninkan 38 jirka ah oo isagu falalkaan denbi hormoodka ka ahaa ayaa lagu hayaa magaalada Malmö oo ah goobta ugu badan oo fal danbiyeedyadaas laga fuliyey.
Ninkan ayaa hadda wuxuu khatar ugu jiraa in lagu xukumo xarig dhan ilaa iyo toban sannadood.